Magaalaa Ukeetti lubbuun namaa darbe. - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa Ukeetti lubbuun namaa darbe.
Goodayyaa suuraa Erga sochiin mormii biyyattii keessatti gaggeefamuu eegalee kumaatamni hidhamaniiru
Guyyoota darban mormiin magaalota Lixa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture itti fufee, Wiixata kaleessaa aanaa Guutoo Giddaa ganda Lookoo magaalaa Ukeetti dargaggeessi tokko yoo ajjeefamu namootni sadi ammoo madaa'aanii jiru.
Jiraataan magaalaa Ukee dubbifne haala jiru wayita nuuf ibsu haleellaa humni ittisaa federaalaa baneen lubbuun namaa baduu fi hedduun madaa'uu dubbata.
''Sadarkaa miidiyaatti hin beekamne malee mormiin durseeti kan jalqabe. Yeroo hiriirri jalqabe sana namoota saditu rukutaman. Sarbaa, qoronyoo fi harkarra rukutaman namoonni kunneen. Isa booda ummanni gara qe'eesaatti deebi'us nageenyi bu'uu hin dandeenye. Qeerroon gaaffii poolisiin federaalaa nurraa haa ka'u jedhu kaasuu ittuma fufan. Warri humna ittisaas rasaasaan ummata rukutuu jalqaban, namooonni sadi rukutamanii tokko yerosuma du'e.Kanneen biroon madaa'an ammoo kellaa fayyaa jiru'' jedha jiraataan magaalaa Ukee kun.
Humnoonni waraanaa dargaggootaa fi manguddoota osoo gargar hin baasiin, mana cabsanii jiraattota reebaa fi hidhaa akka jiran jiraattonni magaalatti ni dubbatu.
Dhimma kanarratti aanga'ootni mootummaa naannawa sanii argachuuf yaaliin goonee dhumaratti Itti gaafatamaa waajjira DhDUO aanaa Guutoo Giddaa kan ta'an Obbo Fiqaaduu Gammadaa argannee haasofsiifnee turre.Isaanis rakkoon qabbanaa'eera gaafa jennu karaa inni ka'ee irra garagalu hin beeknu, tasgabboofne wayita jennu sababatu dhalataa bula jedhu
''Rakkoon uumamaadhuma ture Kanaan duras. Ijoolleen karaa cufaa turan dhiisanii hunduu waldhowwee manatti galan.Poolisoota waliinis mari'atanii erga manatti galanii booda gaddi ganda ollaa, Lookoo jedhamtu magaalaa Ukkeetii dhagahame. Dargaggoonni eeboo baatanii sirbaa dhufan jechuun walitti bu'iinsi uumamuu qaamolee nageenyaarraa dhageenye. Walitti bu'iinsa Kanaan namni tokko battalatti du'ee sadi madaa'an. Warra madaa'an hospitaala referaalaa naannoo Soorgaa jirutti yaalsisaa jirra.'' Jedhan.
Humnoonni federaalaa manarra deemanii ummata dararaa jiru gaaffii jedhuuf wayita deebii kennan ''kan dhimma kanarratti ramadamee nageenya eegsisuuf achi jiru qaamolee nageenyaa fi poolisiidha, an ammaaf quba hin qabu '' jedhan.
Itti gaafatamaa waajira DhDUO aanaa Guutoo Giddaa Obbo Fiqaaduu Gammadaa kana haa jedhaniyyuu malee humni ittisa biyyaa ummata keessa faca'ee jiru sochii guyyaa guyyaa lammiileerratti sodaa hamaa uumaa jiraachuu jirattonni dubbataniiru.
Ummata Oromoo biratti gareen socho'uun daboo fi jigii, gaddaa fi gammachuu geggeeffachuun aadaasaa waan ta'eef wayita lammiin irraa du'u tuutaan ba'ee owwaallachuun waan oolu miti. Mootummaan garuu seera baasee ummanni akka wal hin geenye waan dhorkeef qaama nurraa du'e owwaallachuuf ni rakkanna jedhan namoonni dubbsine. Garuu lubbuu keenya tokkittii dabarsinee kennina malee lammii keenya baanee owwaalla gootaa owwaallachuu hin dhiisnuu jedhan.